Momba anay - Yantai Dongheng Machinery Co., Ltd.
Manety ny hazo
YANTAI DONGHENG MACHINERY CO., LTD
Mpanamboatra fametahana matihanina sy mpivarotra ny milina fananganana, fambolena ary ala, izay manolo-tena amin'ny kalitao milamina ho an'ny mpanjifa.
Miaraka amin'ny traikefa fanamboarana sy fivarotana 12 taona izahay, dia namorona marika KINGER manokana izahay. Amin'ny maha mpanamboatra milina fametahana excavator anay dia manolo-tena ho lohalaharana amin'ny haitao sy ny fanavaozana isika. Amin'izany fomba izany, ny vokatra KINGER dia aondrana any amin'ny firenena maro, toa an'i Alemana, Danemark, Russia, USA, UK, Canada, Netherlands , Nouvelle Zélande, Indonezia, izay eken'ny mpanjifa erak'izao tontolo izao.
Mpanamboatra sy mpivarotra ny milina fananganana sy ny fitaovana ala
Yantai Dongheng Machinery Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2010 ary lasa toerana voalohany amin'ny milina fametahana excavator amin'ny hafainganam-pandeha.
Ny orinasanay dia nandalo ny fanamarinana ISO9001: 2015 sy CE. Izahay dia orinasa teknolojia avo lenta miaraka amin'ny asa, tokana ary fanavaozana. Ny orinasanay dia manana zon'ny fananana ara-tsaina tsy miankina. Hatreto dia nahazo patanty 30 mahery izahay. Izany no mahatonga an'i Dongheng ho lohalaharana amin'ny indostrian'ny milina fananganana sinoa.
2.Ny Orinasa lehibe
Yantai Dongheng Machinery Co., Ltd. dia manolo-tena amin'ny R&D, manamboatra sy mivarotra fametahana excavator ho an'ny fananganana, milina fambolena ary ala.
Ny asa lehibe KINGER dia manana Mini excavator, Earth auger, Log splitter, Log grapple, Saw head, Mixer bucket, Mixer bowl, Hedge trimmer, Chain trencher, Tree shear, Stump planer, Hydraulic hammer, Quick coupler, Sweeping brush ary ireo fananganana milina hafa ary miraiki-po.
Ao anatin'ny dingan'ny fanarahana ny famokarana, manana mpiasan'ny varotra maromaro izahay izay hanao fiezahana tanteraka ary hanao ny kalitao, ny fandefasana, ny vidiny na ny filàna arak'izay takinao mba hahatratrarana ny zavatra antenainao araka izay tratra. , manome antoka ny kalitaon'ny vokatray izahay, manaraka ny fitsipi-pifehezana ary mitazona tsiambaratelo momba ny varotra.
4. Fiantohana ara-toetra
Ny vokatray dia mampiasa teknolojia avo lenta sy vaovao, ampiharina amin'ny fitaovana tsara indrindra ary tohanan'ny fitaovana fanaraha-maso mandroso sy fitiliana isan-karazany mba hahazoana antoka fa tsara kalitao sy fahombiazana bebe kokoa.
Ho fanampin'izany, voamarina mpamatsy volamena ao amin'ny Alibaba izahay, afaka manome entana 100% amin'ny antoka ara-potoana izahay.
Manome fanampiana ara-teknika feno 24 ora sy serivisy an-tserasera izahay. Noho ny fanananay vondrona R&D manokana, raha mila fanampiana ianao amin'ny sehatry ny teknika dia afaka manome tanana anao izahay.
Raha manana fanontaniana ianao aorian'ny fividianana ny vokatray, azafady aza misalasala mamela hafatra ho anay. Hifandray aminao faran'izay haingana izahay aorian'ny fizahana.
Raiso aminay ny vaovao farany
Shanxi Road East, faritra fampiroboroboana toekarena Qixia, Yantai, Shandong, Sina